လက်နက်နဲ့ အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စ – Nyang Media
TTA / တောင်ကုတ်မြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဌ ဦးတင်သိန်းအောင်
ယခုလ (၁၄) ရက်နေ့က လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်လူတစ်စု၏ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရသည့် တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သုံးဦးကိစ္စ နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတချို့ကို တောင်ကုတ်မြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဌ ဦးတင်သိန်းအောင်အား ငြမ်းမီဒီယာ က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – (၁၄ . ၁၀ . ၂၀၂၀) ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက NLD ကိုယ်စားလှယ်သုံးယောက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားတာခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဘာထူးချက်တွေများရှိပါသလဲ။
UTTA – လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ ဘာအဆက်မှလည်းမရသေးတော့ ထူးခြားမှုတော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့လည်းစုံစမ်းနေဆဲပဲ။ သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေလည်းစုံစမ်းနေဆဲပါပဲ။ အဆက်အသွယ်ကတော့ ဘာမှမရသေးပါဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ထားမှုတွေက ဘယ် လိုရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါဦး။
UTTA – ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ထားမှု ကတော့ ကျနော်တို့ တောင်ကုတ်မြို့မရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြပြီးတော့ပေါ့။ နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က တဆင့် ဗဟိုကိုလှမ်းအကြောင်းကြားထားပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ပါတီရဲ့ ဗဟိုကော်မတီကနေ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လမ်းညွှန်စီစဉ်ပေးတာတစ်ခုခုများရှိပါသလား။
UTTA – ကျနော်တို့ ဒေါက်တာမျိုးညွှန့်နဲ့တွေ့တော့ ကျန်တဲ့လူတွေလည်း သတိဝီရိယနဲ့ နေကြဖို့၊ မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေဖို့၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေကို စုဆောင်းပြီး အထက်ကိုတင်ပြဖို့ ကျနော်တို့ကိုမှာ ကြားထားတာရှိပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – (၁၄. ၁၀. ၂၀၂၀) နေ့က အခင်းဖြစ်စဉ်ကို ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လို့သိထားပါသလဲ။
UTTA – ဒါကတော့ ကျနော်တို့က အဲဒီဖြစ်စဉ်ကနေပြန်လည် လွတ်မြောက်လာကြသူတွေဆီကတဆင့်သိရတာပါ။ ဒါက အားလုံးလည်းသိထားပြီးဖြစ်မှာပါ။ ကျနော်သိရသလောက် က ကျနော်တို့ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်သွားကြတဲ့အခါ အဆင့်ဆင့်သွားကြရင်း နောက်ဆုံး တောင်ကုတ်နဲ့ (၁၅) မိုင် လောက်ဝေးတဲ့ ဖောင်းကားကျွန်းကိုရောက်တယ်။ အဲဒီမှာ ထမင်းစားချိန်ရောက်လို့ သူတို့ထမင်း စားဖို့ပြင်နေတုန်းမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်စုက တက်လာပြီးတော့ မင်းအောင်ကို မေးတယ်။
ဒီလိုလက်နက်နဲ့ အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်တဲ့ကိစ္စမျိုးကို NLD ကိုပဲလုပ်လုပ်၊ ဘယ်ပါတီကိုပဲလုပ်လုပ် ကျနော် တို့လက်မခံပါ။ နောက်တစ်ခုက သူတို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားတဲ့ ဒီ (၃) ဦး ရဲ့ …
အဲဒီမှာ ကျနော် တို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေမှာပါလာတဲ့ ဖုန်းတွေ၊ အဝတ် အိတ်တွေကို သိမ်းယူတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ မင်းအောင်ကို ကြိုးနဲ့တုပ်တယ်။ နောက် နီနီကို ကြိုးနဲ့တုပ်တယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သုံးယောက်ကိုတော့ သူတို့သိသွားတော့ ကြိုးနဲ့တုပ်တယ်။ မင်းအောင်ကို ပါးတောင်ရိုက်လိုက်သေးတယ်လို့ ကျနော်ကြားတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ချစ်ချစ်ချောနဲ့ နီနီမေမြင့်အပါအဝင် နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကို ခေါ်သွားပြီးတော့၊ မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး အေးအေးနိုင် ကို လည်း ကျောကို နှစ်ချက်သုံးချက်ရိုက်ပြီးတော့ လှေဆိပ်ကိုခေါ်သွားတာပေါ့။
မြစ်ဆိပ်ကိုဆင်းတာပေါ့။ လှေဆိပ်နားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဟိုက ‘အမြန်အမြန်’ လို့ခေါ်တဲ့အတွက် အေးအေးနိုင်ကိုစောင့်ကြပ်ခေါ်လာတဲ့ လက်နက်ကိုင် တစ်ယောက်က ရှေ့ကိုတိုးသွားတဲ့ အချိန်မှာ အေးအေးနိုင်ကကျန်ခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော်တို့လည်း မြို့မရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားတော့ ရဲစခန်းကလိုက်သွားတဲ့အခါ သူတို့ကိုတွေ့ပြီးပြန်ခေါ်လာတယ်။ ကျနော်သိတာကတော့ ဒီလောက် ပါပဲ။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခု ရွေးကောက်ပွဲရက် နီးကပ်လာချိန်မှာ ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပါတီအနေနဲ့ ဘယ်လိုစီစဉ်ထားပါသလဲ။
UTTA – ကျနော်တို့ကတော့ မြို့နယ်အဆင့်လောက်ပဲရှိတာဆိုတော့၊ ကျနော်တို့အထက်မှာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ်ရှိသေးတယ်။ နောက်ဗဟိုမှာ လူကြီးတွေရှိတယ်။ ဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေနေရာမှာ ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ စီစဉ်လို့မရပါ။ အထက် အဆင့်ဆင့်က ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာကိုပဲ ကျနော်တို့ စောင့်ရမယ်။ သူတို့စီစဉ်တဲ့အတိုင်းပဲ ကျနော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ် ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုလို ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို လက်နက်ကိုင်တစ်စုက အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ခေါ် ဆောင် သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဌတစ်ယောက်အမြင်နဲ့ ဆို ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
UTTA – ကျနော့်အမြင်အရပြောရရင် ဒီကိစ္စက လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့၊ မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ နိုင်ငံရေးကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့မလုပ်ဘဲ၊ လက်နက်နဲ့ အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတာကတော့ ဒါ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပေါ့။
ဒီလိုကိစ္စမျိုး၊ ဒီလိုလက်နက်နဲ့ အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်တဲ့ကိစ္စမျိုးကို NLD ကိုပဲလုပ်လုပ်၊ ဘယ်ပါတီကိုပဲလုပ်လုပ် ကျနော် တို့လက်မခံပါ။ နောက်တစ်ခုက သူတို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားတဲ့ ဒီ (၃) ဦး ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ကျနော်တို့ အလွန်စိုးရိမ် ပါတယ်။
ဒီ (၃) ဦးရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုတော့ သူတို့တာဝန် ယူပေးရပါမယ်။ တာဝန်ခံပေးရပါမယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ သူတို့ကိုအမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ကျနော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ဒီကိစ္စနဲ့.ပတ်သက်ပြီး သူ့ကိုယ်ကျိုးတွေကိုတောင် စွန့်ပြီးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဦးစားပေးပြီးတော့ …
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၃) ဦး ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ စစ်တွေမှာ စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေ ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါစေ ဆိုပြီး ပြောဆို နေကြတာတွေရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
UTTA – ကျနော်မြင်တာကတော့ နိုင်ငံရေးမှာ ဥပဒေကြောင်းအတိုင်းသွားရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေရှိပါတယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်လာလို့ ပေါ်လာရင် သက်ဆိုင်ရာက သူ့ဥပဒေကြောင်းအရအရေးယူမှာပေါ့။
အခုဟာက ဟိုဘက်မှာဒီလိုဖြစ်လို့ ဒီဘက်မှာဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ ကျနော်တို့ဘယ် လိုမှလက်ခံလို့မရပါ။ စဉ်းစားလို့မရပါ။ ကျောင်းသားတွေကိစ္စက ဒါ တစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာ။
ဒီမှာက နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲအတွက်လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ ဒါကတော့ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တဲ့ သဘောမျိုးလို့ပဲ ကျနော်တို့ယူဆပါတယ်။ ဟိုအကြောင်းအရာနဲ့လည်း မအပ်စပ်ပါ။
UTTA – ဖြည့်စွက်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြားနေရတာတွေရှိတာပေါ့။ ဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ NLD ကိုပဲ ထိခိုက် နေတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ NLD ကရော ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကို ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
NLD သည် ရခိုင်တစ်ပြည်နယ်လုံးမှာသာမက တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ဒီကိစ္စနဲ့.ပတ်သက်ပြီး သူ့ကိုယ်ကျိုးတွေကိုတောင် စွန့်ပြီးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဦးစားပေးပြီးတော့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲက နေ ဖြည့်စွက်လုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေရှိပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတရားတွေကို မထောက်ထားဘဲ NLD အပေါ်မှာပဲ စိုက်လိုက်မတ်တပ် သည်းသည်းမည်းမည်း လိုက်လံနှောင့်ယှက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါ တရားမျှတမှုမရှိပါ။ ဆိုတော့ ဒီအနေအထားတွေမှာ တာဝန်ရှိသူများဖြစ်တဲ့ အထက်ကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ၊ ပါတီအသီးသီးကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ၊ ဒီကိစ္စမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေ အမြန်ဆုံးလွှတ်မြောက်ဖို့ ဖိအားပေးကြဖို့ ကျနော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
Tags: AA, NLD, ကိုယ်စားလှယ်, တိုင်းရင်းသား, တောင်ကုတ်, ရခိုင်ပြည်နယ်, လက်နက်ကိုင်